Kuweet hojattoota manaa Itoophiyaarraan barbaada jette - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Beletu Bulbula
Fironni Jo'aanaa Demaafelis, dubartii lammii Filippiin Kiweet keessatti ajjeefamuun reeffi ishee meeshaa qabbanneessu keessatti argameen booda dhaadannoo qabachuun haqaaf gaafataa jiru.
Aanga'oonni Kuweet erga biyyi Fillippiinis lammeenshee akka biyya kana keessa hinhojjaanneef dhorkiteen booda hir'ina jiru guutachuuf jecha hojjattoota manaa Itoophiyaa irraa akka qaccaran ibsanii jiru.
Janaraal Al- Maariif ittigaafatamaan dhiimmoota biyyaa keessaa dhaabbata oduu AFP'tti akka himaniitti, hanqina hojjattoota manaa keessaa jiru guttachuufi kanfaltii hir'isuuf karrasaanii lammiilee Itoophiyattiif akka saaqan himaniiru.
Biyyi Filliippiin ajjeechaa shamarree waggaa 29 kan taa'ee Jo'aanaa Demaafilis kan baatii Fuulbaana keessaa kaaftee baddee turte irratti raawwatameen walqabateelammiileenshee akka Kuweet hinhojjannee dhorkite jirti.
Reeffi shamarree kanaas jalaqaba waggaa haaraa faranjootaatti kan argame yoo ta'uu miidhaan irratti raawaatamusaas h8ubatameera.
Hojjachiftoonni ishee kan abbaan warraa lammii Libaana fi haati warraa dubartii Siriyaa ta'an murteen du'aa kan irratti murtaa'e torban kan ture.
Kana malees mootummaan Itoophiyaa gara biyyota jiddu gala bahaa deemuun hojachuu dhorkaa kaa'ee ture kan kaasee baatiiwwan muraasaan dura ture. Kunis haaluuma miidhaa fi sarbama lammileerra gahuun walqabatee kan taasifame ture.
Bara darbes, poolisiin Kuweet lammii Itoophiyaa gamoo torbaffaa irraa ofi darbattee turte tokko osoo baraaruuf hinyaaliin waraabusheetiif hidhee turuunsaa ni yaadatama.
Gareewwan mirga namoomaa Kuweetiifi biyyoota arabaa bakka humni baqqattootaa sirna 'kafala' jedhamuun daangeefamuu qeeqaniiru. Rights
Kafala ykn haalli deegarsa (sponsorship) sirna vizaa baqattoota hojjattoota warra isaan qaxaran waliin walitti hidhuudha. Kunis hojjattonni hayyama duraan keennameefiin alatti akka biyya gadi hindhiifne ykn hojii hingeeddare kan dhorkuudhu.
Mr Maarifi akka jedhanitti, wayita ammaa kanattis lammiileen Itoophiyaa kuma 15 ol ta'aniitu Kuweet keessa jiraachaafi hojachaa jira.
Lolaa Laga Awaashiin qaqqabeen namoonni kuma 27 ol buqa'an
KALLATTIIN Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19n qabamanii kuma 23 ol ta'e
Amooniyem Naayitreetiin eessafaatti kuufamee jira?
Walitti bu'insa Wolaayitaatti uumameen lubbuun namootaa darbe
Namoonni konkolaataa pirezidaantiitti dhakaa darbachuun yaalii ajjeechaa taasisan adabaman
Hoji-gaggeessaa waggaatti dolaarri mil. 125 kanfalameef